Shinoa nentim-paharazana vita amin'ny bisikileta vita amin'ny alikaola any Shina sy ny mpanamboatra | Chuancheng
Ity andiany Bizina Mugs ity dia vita amin'ny vera matevina matevina sy kalitao.
Ny matevina mavesatra sy mavesatra dia mifehy ny fametahana ho an'ny latsa-danja kokoa. Mialà eo alohan'ny fahitalavitra na amin'ny fety miaraka amin'ny namana miaraka amin'ireo iray amin'ireto gadra ireto eny an-tananao.
Ny famolavola labiera labiera Alemana mahazatra dia mitazona ny hatsiaka mandritra ny fampiroboroboana ny tsirony sy ny hanitra ankasitrahana ary ny lalona matevina.
Mifandanja tsara miaraka amina lanjany mavesatra hanoherana ny fametahana sy ny fandorana, ary manasongadina famolavolana mahazatra izay mora mitazona ary ampy tsara ho an'ny ranomandry ao anaty vata fampangatsiahana - ireo gony ireo dia hitazona ny hatsiakanao amin'ny hatsiaka farany.
Vatabam-Bary lehibe - kofehy maoderina amin'ny fomba nentim-paharazana alemà nentim-paharazana alefan-javatra izay manampy ny soso-kevitra sy ny fomba mahafinaritra amin'ny fisotroan-toakao; mety koa amin'ny kafe sy dite ary zava-pisotro hafa.
Endri-javatra - Ny fantson-tsolika tankey lehibe dia manome fahafaham-po ny mitazona ny harona ary mankafy ny zava-pisotro mandritra ny fotoana maharitra; ny habetsahany 17,25 metatra lehibe ahafahanao mankafy labiera tianao indrindra indray mandeha; Ny ambany matevina dia mampisy fitoniana ary fahatsapana fahatsarana ho an'ny hazondamosina.
Glass Glass an'ny italiana - namboarina tany Italia tamin'ny tora-bolan'ny tompona izay nanolo-tena tamin'ny famoronana mpanangona fitaratra be kalitao avo lenta sy tsy misy dikany; ireto tankards ireto dia manasongadina ny vodirindrina amin'ny alàlan'ny fahatapahan-doko misy modely.
Fampiasana ara-pomba sy maimaim-poana - Ny stein labiera dia tonga lafatra amin'ny fotoana rehetra; na amin'ny mahandro fisakafoanana mijery ny lalao baolina kitra alahady na ho an'ny fankalazana fety amin'ny sakafo fancier dia tsara ao anatin'ireo tranga rehetra ireo.
Torolàlana fikarakarana - Ny solomaso adidy mavesatra dia mora voasa sy malefaka amin'ny fanasana vilia tsy manam-petra, tsy manimba, tsy manimba, ary manala tsiro maina.
Previous: Fanatanjahantena loko matevina
Manaraka: Fitaratra labiera
Carlsberg Bera Can
Carlsberg Basy fitaratra
Carlsberg Bella Tower
Sokajin-tsakafo malefaka any Swing
Vera labiera tsy manam-paharoa
Jumbo Thelas Glass Sports Mugs Mugs
Fanatanjahantena loko matevina